Gigabit Switch — MYSTERY ZILLION
Gigabit Switch နဲ့ CAT6ကြိုး သုံးပြီး ADSL အင်တာနက်သုံးရင် ပိုမြန်လာနိုင်မလား? :39:
ကျွန်တော့်အထင်တော့ bandwidth က 512 KB ပဲသတ်မှတ်ထားရင် ဘယ်လောက်နှုန်းပဲပြေးပြေး 512 KB ထက်ပိုမရဘူး။ Gigabit တွေကတော့ file transfer တွေမှာ တော်တော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ server ပေါ်မှာက 1 GB ကျော်တဲ့ installer တွေပဲဆိုရင် ခဏလေးနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲ ကူးလို့ရတယ်လေ။ Connection ကတော့ ပေးသလောက်ပဲရမှာပေါ့
Net Game ဆိုင်အတွက်ဆိုရင်ကောဗျာ? :39:
အဲဒါဆိုရင်တော့ မြန်နိုင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် လိုမှမလိုတာ.... 100 Mbs ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် လုံလောက်နေပါပြီ။ file transfer တွေ ခဏခဏ လုပ်ရတဲ့ file server တွေအတွက် နောက်ပြီး web server တွေအတွက်သာ လိုအပ်နေတာပါ။ game ဆိုင် အင်တာနက်ဆိုင်ကတော့ 100 Mbs နဲ့လုံလောက်တယ်။ File Server အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။
ကျွန်တော်အိမ်နားကလူတွေက အင်တာနက်ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးနေကတာကို
တစ်ခါတစ်လေ နှေးလို့တဲ့ reply လာလာတက်တယ်...
အဲဒါနဲ့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မြန်ချင်လို့လား... ပြန်ဖြေတာ ( အင်း ) တဲ့